Cabdiraxin : Maalintii 5 mar ayaan siigeystaa talo isiiya shabakadda iftineducation.com - iftineducation.com
iftineducation.com – iftineducation.com – Cabdiraxin : Maalintii 5 mar ayaan siigeystaa talo isiiya shabakadda iftineducation.com
Aqrista lasoo xariiray barnaamijka ila tali ee shabakadda iftineducation.com ayaa waxow nagu soo weydiistay talo page-ka facebook-ga ee shabakada iftineducation.com waxowna leeyahay.
ila taliya maalintii 5 mar ayaan siigeystaa waana iska gooyn la’ahay dabeecadaan xun ee maxaan sameeyaa?
Waa kanaa page-ka facebook ee shabakadda iftineducation.com hadaad su’aalo qabto aqristoow : https://www.facebook.com/iftiinka.aqoonta
Talo Celinta Shabakada iftineducation.com:
Cabdiraxin waad ku mahadsan tahay inaa barnaamijka ila tali ee Page-ka Facebook Shabakadda iftineducation.com nagu soo weydisato talo, waana sababta aan u aas aasnay barnaamijka ila-tali si aan bulshada uga xaqabtiro dhibaatooyinka qooyska iyo ka talinta wanaaga bulshada.
RIIX HALKAAN KA DAALACO AKHRISTAYAAL TALO NASOO WQEYDIIYAY
Hadaba shabakadda iftineducation.com waxey kaala talineysaa, kaana saacidi doontaa inaad joojiso siigeysiga oo qatar ku ah naftaada cuduro badana laga qaado.
RIIX Halkaan ka aqriso dhibaatada ay leedahay siigada iyo cudurada laga qaado
Hadaad maalintii 5 jeer siigeysato waxa weeye macnaheeda kacsigaaga ayaa aad u badan shabakadda iftineducation waxey kugula talineysaa si’aad igasaga joojiso balwadaan xun ee siigada.
1. Marka koowaad inaad guursato waa xalka ugu fiican aadna ku qaboobeyso haka baqin xaaskaaga maxaa siineysaa hadhow ileen irsaaaqada allah ayaa balan qaaday xisaab la’aan asagaana adoomadiisa irsaaqa meel kasta ay joogaan.
2. Marka labaad hadii aad awoodin inaad hadda dhaqsi ku guursatana shabakada iftineducation.com waxey kugula talineysaa inaad soonto si shahwadaada u yaraato ama isu dhinto insha allah.
Nabiga CSW ayaa dhahay guurso hadaadan guur awoodina soon.
3. Marka sadaxaad shabakada iftineducation.com waxey ku leedahay ka fogoow inaad daawato sawirada gabdhaha qaa-qaawan iyo filimada anshaxa xun si dareenkaaga u kicinin.
Qof Ale Qofkii talo celin u baahan waxow su’aalo nagu soo weydiin karaa barnaamijka ila-tali ee shabakada iftineducation.com PAge keena facebook-ga : https://www.facebook.com/iftiinka.aqoonta